သက်ဝေ: စိတ် အကိုက်ခံရခြင်း
kaungkinpyar July 14, 2010 at 11:09 PM
ပရွက်ဆိတ် ရှိရင် ဂျပိုး မလာဘူး ပြောကြတာပဲ....ဟုတ်မဟုတ်တော့ သိဘူးရယ်...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း July 14, 2010 at 11:34 PM
khin oo may July 14, 2010 at 11:53 PM
သိင်္ဂါကျော် July 15, 2010 at 12:27 AM
အတွေးကောင်း အရေးကောင်းတဲ့ အက်ဆေးလေးပဲ..
sonata-cantata July 15, 2010 at 12:42 AM
တို့များက ကြက် ငှက် တွေရဲ့ အမွှေးအတောင်တွေကို ကြောက်ပါတယ်။
ကြက်တွေကို ရဲရဲ မကြည့်ရဲပါ။
ငယ်ငယ်က နေမကောင်းဖြစ်နေစဉ် ကြက်ကို ခွေးဆွဲတာ မြင်လိုက်ရကတည်းက ဖြစ်ပါသည်။
အကိုက်ခံလိုက်ရသည့် စိတ်ကို အခါအခွင့်သင့်လျှင် ကြိုးစား၍ ကုစားကြည့်ပါသော်လည်း မအောင်မြင်သေးပါ။
Hmoo July 15, 2010 at 3:02 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 15, 2010 at 3:23 AM
တကယ်လို့များ အင်းဆက် တစ်ကောင်ကောင် နားထဲဝင်ရင်
ဆီ (အုန်းဆီဖြစ်ဖြစ်) အသာလေး ထည့်ပေးလိုက်ရင် ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်..
တစ်ခြား ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး အစ်မ..
တကယ်လို့များ နောက်တစ်ခေါက် ဖြစ်လာခဲ့ရင်ပေါ့နော်..
မေဓာဝီ July 15, 2010 at 3:34 AM
အမသက်ဝေ ... ကိုယ်ပဲ အကိုက်မခံနဲ့လေ .. ပြန်ကိုက်ပစ်။ :P
အဲဒီ ပွက်ဆိတ်အနီလေးတွေ တအား အမြင်ကပ်တယ်။ ကိုက်ရင်လဲ နာမှ နာ။ ပန်ပန်ဆွဲတဲ့ အမဲရောင်မျိုးကတော့ မကိုက်ပေမဲ့ ရွစိရွစိ တက်လာရင် မုန်းတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ The Ants အဖွဲ့တို့ Ant Z ရုပ်ရှင်တို့တော့ အကြိုက်သား။ :)
လသာည July 15, 2010 at 7:38 AM
စိတ် အကိုက်ခံရခြင်းတဲ့လား..။ ဆန်းသစ်လိုက်တဲ့ အတွေးလေး..။
တပုဒ်ချင်းတပုဒ်ချင်း ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း အတွေးအများ ကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ ဖတ်ရတာ တအားကြိုက်တယ်။
နောက်ဆို အမြဲလာဖတ်မယ်နော်။ လင့်ခ်ယူသွားတာ ခွင့်ပြုပါလို့
အကြံပေးချင်လို့ပါ ကိုယ်လဲ ပုရွက်စိတ်မုန်းသူပါ။ သူတို့လာနိုင်တဲ့ နေရာမှာ ပရုတ်လုံးလေး တလုံးလောက်ချထားလိုက်။ ဥပမာ ထမင်းစားပွဲတောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ မီးဖိုချောင်စင်ထောင့်ထောင့်ဖြစ်ဖြစ်။ စိတ်ပိုသန့်ချင်ရင် ပရုတ်လုံးကို ပလတ်စတစ်အိပ်အသေးလေးထဲထည့်ပြီး အိပ်ကို အပေါက်လေးတွေဖောက်ထားလိုက်။ သူတို့ အရမ်းကြောက်တယ် တကောင်မှလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
pandora July 15, 2010 at 9:01 AM
၂) ရေကြီးမယ့် မိုးရွာမယ့်သဘော ပေပဲ။
ပြင်ညာချိပီပီ တွေးတွေးဆဆ သုံးသပ်သွားသည်။
Vista July 15, 2010 at 9:44 AM
T T Sweet July 15, 2010 at 10:09 AM
အန်တီသက်ဝေရေးတဲ့ အက်ဆေးလေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်။
ပုရွက်ဆိတ် အိမ်မှာတော့ သိပ်မတွေ့ဘူး။ ငယ်ငယ်က နားထဲဝင်ဘူးတယ်။ အရမ်းခံရဆိုးတယ်နော်။
မြွေက ဂမ္ဘီရ နည်းနည်းဆန်တယ်လေ
သဒ္ဓါလှိုင်း July 15, 2010 at 12:57 PM
ညီမလေး July 15, 2010 at 2:33 PM
ရှယ်ပဲ ... ကောင်းမှကောင်း ဖတ်လို့ ။
ဟုတ်တယ် မမသက်ဝေ .. စိတ် အကိုက်ခံရတာ ပိုနာတယ် .. ကုစားဖို့လဲ ခက်တယ် ။
Y July 15, 2010 at 7:52 PM
Very nice post, very good to read. It's exciting also.
Thet Wai, I looking forward to read more & more like this post.
You are very good writer.
Sorry for comment in English. I was away from home & I cannot write in Myanmar.
နေ၀သန် July 15, 2010 at 8:50 PM
တော်လိုက်တဲ့အရေး... အတွေးလေးက ကောင်းတာကို လက်ကနေ ခပ်သွက်သွက်ဖန်တီးလိုက်တာ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ...... ခေါင်းစဉ်လေးကလည်းလှလိုက်တာ... စိတ် အကိုက်ခံရခြင်းတဲ့... အင်း..
Shinlay July 15, 2010 at 9:09 PM
တခါတခါ သူတို့ ကို ဒေါသထွက်မိတယ်။
ဒီမှာတော့ သူတို့ သိပ်မရှိကြဘူး။
သင်းနွယ်ဇင် July 15, 2010 at 9:20 PM
အက်ဆေးလေးလာဖတ်သွားပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ပရွက်ဆိတ်တွေတက်ရင် စိတ်ဒုက္ခအရောက်ဆုံးပဲ။
သက်ဝေ July 15, 2010 at 9:37 PM
ပုရွက်ဆိတ် ပပျောက်ရေး အကြံတွေ ပေးသွားကြသူများကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသလို နှိမ်နင်းကြည့်ပါအုံးမယ်...း))
အသားနာတာ ပျောက်သွားပေမယ့် ကြောက်လန့်နာကျင်နေတဲ့ စိတ်ကလေးကတော့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါလဲ အခုလို အားပေးစကားတွေကြားထဲမှာ မကြာခင်မှာ ပျောက်သွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်...။
ကောင်းသော ညပါ...း))
ဦးနှောက် အကိုက်ခံလိုက်ရတာကိုး သွပ်သွပ်သွပ်။
ဇွန်မိုးစက် July 16, 2010 at 12:18 AM
အစ်မသက်ဝေ အက်ဆေးအရေးကောင်းတာ ထောက်ခံပါ၏။
ကတ်ကြေးတုန်းက ကတ်ကြေးမို့၊ ပုရွက်ဆိတ် ပုရွက်ဆိတ်မို့ နောက်..ဘာများလာဦးမလဲနော်။
မကြောက်ပါနဲ့အစ်မရ။ မေတ္တာပို့ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့က သေးးးသေးးးလေးးးးးးတွေ၊ အလွန်ဆုံး ကိုက်ရုံပေါ့။ ;)
တွေတွေ့ရင်..လက်လေးနဲ့ ဖိလိုက် ..
ကြမ်းပိုးတွေ တွေ့ရင် ဖနောင့်နဲ့ ဖိလိုက်ပါ..
သက်ဝေ July 16, 2010 at 8:47 AM
အားးးး ပေါက်ရေ... ကြမ်းပိုး ဟုတ်ပါဘူး...
ကိုယ်ကြောက်တာ ပိုးဟပ်ပါ...း))
ဇွန်.. ညီမ... အဲဒီပိုစ့်အောက်မှာ Link လေး ပေးထားတယ်... ဖတ်ကြည့်လေ...း))
မအယ်... ဟုတ်တယ် ဦးနှောက်အကိုက်ခံလိုက်ရလို့ လူလဲ အခုလို ခပ်ချောင်ချောင် ဖြစ်နေတာလေ... အဟီး..
ရေသန့်July 16, 2010 at 11:27 AM
ကိုယ်သာနာစေ စိတ်မနာစေနဲ့လို့ တော့ ကြားဖူးတယ်
စိတ်အကိုက် မခံနဲ့ လို့ လည်းမှတ်ယူရမယ်ထင်တယ်
မြသွေးနီ July 16, 2010 at 4:10 PM
စိတ်ကို ကိုက်သွားသောအခါ အချိန် အတော်ကြာကြာအထိ ခံစား နာကျင်နေအုံးမှာ ဖြစ်သည်... ဆိုတာလေး နှစ်သက်မိ၏။ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။
blueskyforest July 16, 2010 at 11:46 PM
ထိုင်းမှာတော့ ပရွက်ဆိတ်တွေကို ကြော်စားကြ သကွဲ့ ။ ညညဆို ပုရွက်ဆိတ်သည်တွေ လှည်းနဲ့ လှည့်ပြီး ရောင်းနေကြတာပဲ။ ပုရွက်ဆိတ်ကြော် ကို ပင်စိမ်းရွက်လေးတွေနဲ့ ထိုင်းပျိုဖြူတွေ မက် မက်မောမော စားတာထိုင်ကြည့်ဖူးတယ်။ စား ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ သက်ဝေ စမ်းကြည့်ပါလား။း)
nu-san July 17, 2010 at 12:05 AM
မမပို့စ်ကို လာဖတ်တာ အခုပါနဲ့ဆို ၄ ကြိမ်မြောက် .. တစ်ခါမှ မပြီးလိုက်ဘူး.. ဘေးက ဂျစ်တူးလေးကြောင့်.. အခုမှ အေးအေးဆေးဆေး လာဖတ်ရတယ်.. ပုရွတ်ဆိတ်ကို မုန်းလှတာ မဟုတ်ပေမယ့် အနီကောင်ကြီးတွေ အကိုက်ခံရရင် အရမ်း ဒေါသထွက်တယ်.. အစားအသောက်ထဲကို အနီသေးသေးလေးတွေ ၀င်ကိုက်ရင်လည်း စိတ်တိုတယ်.. ဗိုက်ဆာနေချိန်ဆို အဆိုးဆုံးပဲ.. နောက်ပြီး အမဲရောင်အကောင်တွေဆို အုံလိုက်ကြီး သွားလာနေတာ မြင်ရရင်ကို ရွစိ ရွစိနဲ့ အသည်းယားတယ်.. ကံကောင်းတာက ဒီမှာ ပုရွတ်ဆိတ် လုံးဝ မရှိလို့ တော်သေးတယ်.. :D ဒါပေမယ့် အခုတော့ နေပူလို့ ပိုးဟပ်တွေ ထွက်နေပြီ မရေ.. အမလည်း သတိထားဦးနော်.. :))
mae July 17, 2010 at 9:47 PM
အနော့် နားထဲ ပုရွက်ဆိပ် ဝင်တော့ မောင်လေးက ရေချိုးခန်းထဲ ဆွဲခေါ်ပြီး နားထဲကို ရေလောင်းချတယ်.. ကလော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရင် ကြောက်ပြီး နားထဲ သောင်းကျန်းမှာစိုးလို့
မမသက်ဝေ.. ရန်ကုန်မှာလို စားပွဲခြေထောက်တွေမှာ မြေဖြူခဲလေးတွေ တားထားလို့ မရဘူးလား
အတွေးကောင်း..အရေးကောင်းတဲ့ essay လေးပါ...ဟုတ်ပါတယ်...လူတွေမှာ စိတ်မှာအကိုက်ခံရရင် အတော်နဲ့ပျောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး...